Xiriirka Ganacsi Ee Turkiga Iyo Afrika Oo Xoogaystay
Horumarka dhaqaale ee Turkiga uu sameynayay tobonnaankii sano ee lasoo dhaafay waxaa wehelinayay daneyn uu daneynayay wadamada Afrika. Ganacsiga uu la sameynayay Afrika 2003-dii ayaa waxa uu ka kacay $3 Biyan oo doollar iyada oo uu gaaray $20 Bilyan oo doollar.
Turkiga waxa uu aad ugu dhex-milmay dhaqaalaha iyo ganacsiga Afrika waxii ka dambeeyay sanadkii 2005-tii kadib markii raisul-wasaaraha waqtigaas hadana ah Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan uu la yimid siyaasad lagu wanaajinayo xiriirka Turkiga uu la leeyahay qaarada Afrika. Siyaasada xiriir ee Turkiga la leeyahay Afrika waxa ay dhaaftay heerkii dowladda Turkiga ay ka fileysay oo waxa uu gaaray in shirkii ugu horeeyay ee looga hadlayay Dhaqaalaha iyo Ganacsiga ee Turkiga iyo Afrika ay kasoo qeybgalaan 2,000 of Afrikaan ah oo doonayay in ay la kulmaan dhigooda Turkiga oo ay afkaar iyo waayo-aragnimo is dhaafsadaan.
Sanadahii lasoo dhaafay waxaa jiray koror dhanka kaalmada horumarineed ee uu Turkiga siinayo Afrika oo ay maamuleyso ha’adda Turkiga u qaabilsan Wada-shaqeynta iyo Xiriirada Caalamiga ah ee TIKA. Sanadkii 2008-dii waxa ay Afrika ku laheyd sadex xafiis oo kaliya, halka maantana ay ku leedahay 21 xafiis. Waqti xaadirkan ha’adda TIKA waxa ay ka howl-gasha guud ahaan Qaarada Afrika, waxa ayna kaalmaysaa nolosha dadka Afrika oo ay Soomaaliya ugu horreyso.
Howl-galka TIKA ee ay ka wado Soomaaliya waa mid aad u ballaaran oo muuqda. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa amray in TIKA ay howlaheeda kaalmasiinta ay ka bilawdo Soomaaliya horraantii sandii 2011-kii, waxaana xigay booqashooyin uu ku bixiyay dalka Soomaaliya oo ah wadan aysan kusoo dhiiran madaxda dalalka kale.
Waqtigaas waxii ka dambeeyay, ha’adda Turkish Relief Organization waxa ay siisay Soomaaliya $350 milyan oo ah kaalmo horumarineed. Kaalmooyinka ay Turkiga siiyeen waxaa kale oo kamid ah dhismaha waddooyin gaaraya 34 kiiloomitir oo caasimadda ah iyo dhismaha cisbitaallo uu ka mid yahay digfeer iyo tababaridda dhaqaatiirtii ka howlgali laheyd.
Sidoo kale Turkiga ayaa hadda soo gababeeyay dhismaha xarunra Golaha aqalka sare ee Soomaaliya, oo si aad ah ay u qalabeeysay hayadda TIKa..
Madaxweynaha dalka, Xassan Sheekh Maxamuud, ayaa amaanay taageerada ha’adda TIKA isaga oo sheegay in TIKA oo kaliya aysan aheyn shirkadaha Soomaaliya lacag badan ku bixiya, balse TIKA ay tahay ha’adda aan lala barbar dhigi Karin ha’adaha kale marka laga fiiriyo sida ay u saameysay nolosha dadka Soomaaliyeed.
Soomaaliya oo kaliya ma aha wadamada uu Turkiga saameynta dhaqaale iyo ganacsi ku leeyahay waxuuna ku baahnsanyahay dhammaan qaaradda. Madaxweynaha Turkigana waxa uu maalgeshtayaalka Turkiga ku guubaabiyay in ay xoojiyaan maalgashiga Afrika si labada dhinacba ay u guulesytaan.